ဗဟုသုတ | ngalone
HomeNgaloneArakanHistory of Arakanရခိုင်ဆိုသည်မှာPhotoစိုင်းတင်ဓါတ်ပုံချေတိဘူးသီးတောင်ဓါတ်ပုံချေတိဘူးသီးတောင်မြို့ဒုံးပွဲ ဓါတ်ပုံတိဝက်ကျိန်းဘုရားဓါတ်ပုံချေတိမြောက်ဦးဘုရားပုံများဘူးသီးတောင်မြို့ အစွန်ဆုံး တောင်ပေါ်အလှတရားများ(ဓါတ်ပုံ)စာအုပ်စင်ရခိုင်စာအုပ်မြန်မာစာအုပ်နိုင်ငံရေးစာအုပ်ဥပဒေရေးရာစာအုပ်သတင်းရခိုင်ဝက်ဆိုဒ်လမ်းညွှန်Arakan Video/Music
Valentine ‘s Day အကြောင်း
V = vacant of my heart is always for you
A = apple of my eye you are
L = lead of my hole life
E =ever lasting love is only for you
N = never forget you until die
T = tender heart is mine:Please don’t cruel”
I = idyllic man man for me you are
N = near me always:don’t leave me alone.
E = expend time with you in Valentine day is my wish.
Credit to ..
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	ရခိုင်ဒေသနှင့် အမ်ဂျီအို(အပိုင်း ၁)
ကမ္ဘာနိုင်ငံများထဲ့တွင်ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ဆိုးရွားနိမ့်ကျလျက်ရှိပါတယ်။ ဒိလိုနိမ့်ကျနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို UN/NGOs အဖွဲ့တွေက ကျန်းမာရေးအကူအညီတွေ၊ ပညာရေးအကူအညီတွေ အဘက်ဘက်က ထောက်ပံကူညီ နေကြတာဟာ အလွန်ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒိလိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ UN/NGO တွေကို ရခိုင်ဒေသမှာ ကန့်ကွက်မှုတွေ ၊မကျေမနပ်ဖြစ်မှုတွေ တိုးပွားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်အဖြေရှာဖို့လိုလာ ပါပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ် (၁၇)မြို့နယ်ရှိတဲ့အထဲ့မှာ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ စစ်တွေ စတဲ့မြို့(၃)မြို့မှာ UN/NGO တော်တော်များများဟာ အခြေချ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မောင်တောမြို့မှာဆိုရင် UN/NGO တွေရဲ့ ဌာနချုပ်လို့ ဆိုရလောက်အောင်ကို UN/NGO အဖွဲ့တွေ များလှပါတယ်။
NGO နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ဒေသခံ လူငယ်တစ်ဦး ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူက “ကျွန်တော်က NGO တွေကို တော်တော် စိတ်ကုန်နေပါပြီ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘူးသီးတောင်-မောင်တော ဒေသမှာ အလုပ်အကိုင်ကတော်တော် ရှားပါတယ်။ Company တွေလဲ မရှိဘူး၊ အစိုးရအလုပ်ရဖို့ ကလဲတော်တော်ခက်တော့ ၊အမ်ဂျီအို တွေမှာ များ ရမလားဆိုပြီး ကြီုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ရုံးတွေကို ချောင်းပေါက်အောင်သွားပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တဲ့ အလုပ်ခေါ်သမျှကို လိုက်လိုက်လျှောက်တာ ( ၂-၃) နှစ်အတွင်းမှာ အကြီမ် ၆၀ ထက်မနည်းလျှောက်ခဲ့တယ်။
ACF ရုံးမှာတစ်ခါ လျှောက်တုန်းက ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ (Vacancy Announcement) အလုပ်ခေါ်စာမှာပေါ့ computer တက်ရမယ် ဆိုပြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကိုယ်လဲ computer တက်တော့ ရမလားဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ လျှောက်လိုက်တာပါ။ ဘာရမလဲ အင်တာဗျုးလေးတောင်မပါပါဘူး ၊ ခန့်လိုက်တာက တောထဲ့က ဘင်္ဂလီ လူမျိုးကို ခန့်လိုက်တယ်။ computer ဆို မြင်တောင် မမြင်ဖူးတဲ့လူကို ခန့်တာ။ သူ့တို့ ရဲ့အလုပ်ခေါ်စာမှာပါတဲ့ essential requirement နဲ့ သူတို့ခန့်တဲ့လူ ရဲ့ qualification က ဘာမှကို မဆိုင်ဘူး။
NGO မှာအလုပ်တွေလျှောက်တိုင်း ကုလားစကားမကျွမ်းကျင်လို့ မခန့်တာနဲ့၊ အင်္ဂလိပ်စာ မကောင်းလို့ မခန့်တာနဲ့ ၊အတွေ့ အကြုံမရှိလို့ မခန့်တာနဲ့ မခန့်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေက တော်တော်များပါတယ်။ နောက်တော့ အမ်ဂျီအို မှာ အလုပ်လျှောက်ရမှာကို စိတ်ပျက်လာတယ် လှည့်ကို မကြည့်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးကျွန်တော် နားလည်လိုက်တာက ဒိ NGOs တွေက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူး ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို ခန့်တယ် ဆိုတာက မခန့်မဖြစ်တဲ့ နေရာတွေ ဥပမာ ဆရာဝန်တွေ၊ နာစ်တွေ၊ ကျွမ်းကျင်ပညရှင်တွေ အဲ့လိုမျိးတွေမှ ခန့်တာ။ အဲ့လို ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေက လဲ ရန်ကုန်ဘက်က လာတဲ့လူများပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒေသခံရခိုင်တွေ ကို ခန့်တယ်ဆိုတာက ရုံးတစ်ရုံးရဲ့ ၀န်ထမ်းအင်အားရာခိုင်းနုန်းနဲ့ တွက်မယ်ဆို ရင်တော်တော် နည်းပါတယ် ”။ ရခိုင်လူငယ်လေးက ရင်ဖွင့် ပြောပြခဲ့တာပါ ။
အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ NGO တွေအလုပ်တွေရပ်နားထားပါတယ်။NGO တွေဟာ ရခိုင်နဲ့ ဘင်္ဂလီ ကို ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံတယ် ၊ ဘင်္ဂလီ ကို မျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလက်ရှိ အမ်ဂျီအိုမှာ လုပ်နေဆဲ အမ်ဂျီအို ၀န်ထမ်းတစ်ဦး ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
သူပြောပြတာက “ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတော့ rule and regulation ဆိုတာရှိပါတယ် ။ သူတို့ပြောတာတော့ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာန နဲ့ ညှီနှိုင်းပြီး ရေးထားတာတဲ့။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကျနော်လဲမသိဘူး။ တရုံးနဲ့ တရုံး ပုံစံတွေက တော့အမျိုးမျိုးပဲ။ အလုပ်သမားချင်းအတူတူ ရခိုင်တွေနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ ခံစားခွင့် တွေတော့ ကွဲပါတယ်။ ဥပမာ -ဘင်္ဂလီတွေ အတွက် သောကြာနေ့ ဗလီတက်ဖို့ အတွက် ACF ရုံးမှာဆို ရင် ၁၂း၃၀ ကနေ ၂း၃၀ ထိ၊ တခြားရုံးတွေမှာ ၁၂း၃၀ ကနေ ၂း၀၀ ထိ သူတို့ ဗလီတက်ဖို့ အတွက် ရုံးချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးတယ် ။တချို့ ရုံးတွေမှာဆို ရုံးထဲ့မှာကို ဗလီတက်ဖို့ သီးသန့်အခန်းလုပ်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒဘာသာတွေအတွက် ၀ါတွင်း ၃ လ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဥပုဒ်နေ့တွေမှာ တစ်ရက်လုံး ဥပုဒ် သိလ ဆောက်တည်ဖို့ မပြောနဲ့ သီလယူဆောက်တည် ဖို့ ၁နာရီ အချိန်နည်းနည်းလေးတောင် လုပ်ပေးထားတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော် ဖြစ်စေချင်တာက ဥပုဒ်နေ့မှာ မနက်စောစော ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွား (၅)ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးရင် ၉ နာရီလောက်ဆို ကျနော်တို့ ရုံးပြန်တက်လို့ ရပါတယ်။ဘင်္ဂလီတွေကျ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတွက်လုပ်ပေးထားပြီး ကျနော်တို့အတွက် ၀ါတွင်း ၃ လမှာ တစ်ပတ် ၁ နာရီလောက်ကလေးကို တော့လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အမ်ဂျီအို အဖွဲ့တော်တော်များများမှာ ရုံးအတွင်းမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ၀န်ထမ်းအိမ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ဘင်္ဂလီတွေ ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ၀က်သားမစားရဘူးလို့ ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ၀က်သားစား လို့ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ကွိုင်တက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေလဲ အများကြီးပါ။ အစားမတော်လို့ အလုပ်ပါအဖြုတ်ခံရပါတယ်။နောက်ပြီး ကုလားကို ကုလား လို့ မခေါ်ရပါဘူး၊ မူဆလင်လို့ ခေါ်ရတယ် .။ကုလားလို့ခေါ်ရင် ပြသနာတက်တော့တာပဲ။လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မနဲ့ပေါ့။ မွေးကတည်း ကဒိဒေသမှာ ကုလားလူမျိုး ကုလားလို့ပဲခေါ်လာတာပဲ။ မူဆလင်လူမျိုးဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ngo မှာသက်ဆိုးရှည်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ် မကြားဖူးတဲ့ မူဆလင်ဆိုတဲ့ လူမျိုးကို လဲနူတ်ကျိုးအောင် ခေါ်တက်ရပါမယ်။ မဟုတ်ရင် ..။ တိုင်းရင်းသား ၀န်ထမ်းတွေက တော့ အားလုံးကို ကြောက်နေရတာပါပဲဗျာ။ရခိုင် လူမျိုးတွေ က ဘင်္ဂလီကို discrimination လုပ်တယ်လို့ အမ်ဂျီအိုက နိုင်ငံခြားသားတွေ က ပြောတယ် ၊ တကယ်တမ်း discrimination လုပ်ခံနေရတာ က ရခိုင်တွေပါ။
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	၁၉၈၂ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ပယ်ဖျက်ရေး နောက်ကွယ်မှာ ဘာတွေရှိသလဲ ?
နိုဝင်ဘာ ၆ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၇)မှ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မြက ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာ နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ရေးအဆိုကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါတင်သွင်းခဲ့သောအဆိုမှာ လ၀က ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီအပါအ၀င် ကိုယ်စားလှယ် (၁၀) ဦးက ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီး ကန့်ကွက် သူများသဖြင့် အဆိုကို မှတ်တမ်းတင်ရန်သာဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ယခု တင်သွင်းသော အဆိုမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရခိုင်-ဘင်္ဂလီကိစ္စကို အခြေခံပြီး တင်သွင်း လာသည်ဟု ယူဆရပြီး၊ ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကို အကြောင်းပြကာ လူမျိုးခြားဘင်္ဂလီများအတွက် များစွာ အခွင့်အရေး ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဆိုပါ အဆိုရှင်၏နောက်ကွယ် တွင် နှပ်ကြောင်းပေး စေခိုင်းနေသူများ ရှိနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြ သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေရေးဆွဲစဉ်က အချိန်များစွာရယူခဲ့ပြီး ပြည်သူကို ချပြအသိပေး အကြံဥာဏ် များရယူကာ ရေးဆွဲ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဘင်္ဂလီလိုလားသူများ၏ နှောင့်ယှက် စွက်ဖက်မှုများ ရှိလာနိုင် သောကြောင့် ထွက်ပေါ်လာနိုင်မည့် ဥပဒေမှာ နိုင်ငံခြားခိုးဝင်သူ လူမျိုးခြားဘာသာခြားများအတွက် အခွင့် အလမ်းများ စွာရှိလာနိုင်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ရခိုင်လူမျိုး နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ တစ်ဦး ကပြောကြားသည်။ ဥပဒေပယ်ဖျက်ရေးအဆိုကို တင်သွင်းသည့် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မြမှာ ယခုတလောပြည်သူများကြားတွင် နာမည်ပျက်အဖြစ်ရိုက်ခက်နေသည့် မူဆလင် ဘင်္ဂလီလူမျိုး ၃ ဦး ပါဝင်သည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှဖြစ်ပြီး ထိုအဆိုကို ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းရန် မသင့်တော် သဖြင့် အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မြကို အယောင်ပြ စည်းရုံး တင်သွင်းခိုင်းခြင်း ဖြစ်နိုင် ကြောင်းနှင့် ၄င်းကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအမတ်များအတွက် ငွေကြေးနှင့် အခြား အခွင့် အလမ်းများ မက်လုံးပေးပြီး ၄င်းတို့တင်သွင်းစေခြင်သော အဆိုများကို လူစားထိုး တင်သွင်း စေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်နေကြပါသည်။
credit to http://www.arakanalp.com/?p=1434
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	နွားကွဲ လျှင် အမဲသားဖြစ် မည်(ရခိုင်နိုင်ငံရေး ပါတီ နှင့် နိုင်ငံရေး သမား များ သို့)
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	အမေကျော် ဒွေးတော်(ဒေါ်စုကြည်) မလွမ်းဖို့
ဒိ Post ကို ရေးလိုက်တာ မည်သူ့ ကိုမှ နစ်နာစေလိုတဲ့ ၊အပုပ်ချ စော် ကားချင်တဲ့ စိတ်မရှိပါဘူး ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး ။ ကျွန်တော်ရဲ့ အမြင် ကို အမှန်တရားတွေနဲ့ ချိန်ဆပြီး ..ရေးလိုက်တာပါ ။ဒါဟာ ကျွန်တေ့် ရဲ့ စေတနာပါ ။ ကြက်မှာ အရိုး လူမှာအမျိုး အမျိုးစစ်မှ အမျိုးချစ်မည် ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ရှေးပညာရှိတွေ ထားခဲ့တဲ့စကားပါ။ ခေတ်တွေ ဘယ်လို ပြောင်းပေမယ့် အမျိုးစစ်မှ အမျိုးချစ်မည်ဆိုတာက ဘယ်တော့ မှ ပြောင်းလဲမှာ အဟုတ်ပါဘူး ။ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်မှာ ဆိုရင်လဲ အမျိုးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဇယား အထက်မှာ ပါတဲ့ အတိုင်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ပုဂံ မင်းသမီးတွေ ကနေ ဆင်းသက်လာ တဲ့ ဗမာစစ်စစ်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် နိုဘယ်ဆုရှင် မြန်မာ့ ဒိမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဒေါ်စု လက်ထက်ရောက်မှ ပဲ အသားက ဖြူစပ်စပ် နီကြောင်ကြောင် ၊ မျက်လုံး က စိမ်းဖန့်ဖန့် ၊ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုး ဗမာနဲ့ တူတာဆိုလို့ ဘာမှ ကို မရှိတဲ့ နိုင်ငံ ခြားသားကို လင်လုပ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အသွင်မတူ အိမ်သူမဖြစ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံ ကို မှားတယ်လို့ ပဲဆိုရမှာ လား ၊ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ အသွင်မတူ ပေမယ့် အကြံ တူလို့ အိမ်သူ ဖြစ်ခဲ့တာ လားဆိုတာကို တော့ ဒေါ်ဒေါ်စုပဲ သိမှာပါ ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ သူ့ ရဲ့ မျိုးဆက်ဟာ မျက်နှာဖြူ တွေ ဖြစ်လာလိမ့် မယ်လို့ စိတ်ကူး ထည့်မှာတောင် ရှိခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်ဒေါ် စု က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် ကိုပြောခဲ့ဖူးတာ ရှိပါတယ်။ “ကျွန်မ သာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေခဲ့ ရရင် ရှင်နဲ့တောင်ရရင်ရနေမှာ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ စဉ်းစား ကြည့် ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တို့ ရဲ့ ဘ၀ ဟာ သနားစရာကောင်းတာတော့ အမှန်ပါ။ အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ ၊ကြိုးချင်း ထား ကြိုးချင်း ငြိဆိုသလိုပါပဲ ။ ငြိစရာမရှိ ထိစရာမရှိလို့ မျက်နှာဖြူနဲ့ ပဲ ထိရ ငြိရ တဲ့သဘောပေါ့ ။ ကျွန်တော် တို့ ရွာမှာ နွားမျက်နှာကို ကြည့် ပြီးတနေကုန်အလုပ်လုပ်ကြ ရတဲ့ လူတွေရှိပါတယ် ။တကယ်လို့ အခြေအနေ မပေးရင် သူတို့ လဲ နွားတွေနဲ့ ထိရ ငြိရ မယ့်သဘောလား။ စော်ကားတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ စကားအသွးအလာရဲ့ သဘောကို ပြောပြတာပါ ။ ကိုယ့်အဖေ ရဲ့ ဂုဏ်ကိုတော့ ထောက်ခဲ့ ဖို့ သင့်ပါတယ်နော့။
ဗိုလ်ချုပ် နှင့် မြေး(ဒေါ်စုသား)
မြန်မာ့ ဒိမိုကရေစီခေါင်းဆောင် နှင့် ၄င်းသား မျက်နှာဖြူ ကလေးများ
ခေါင်းဆောင် တို့ မိသားစု
စာရေးဆရာ ချစ်စံဝင်းရဲ့ မျက်နှာဖြူနဲ့ ဗမာမလေးတစ်ယောက် ညားသွားတဲ့ “ရှက်ပြုံး” ၀တ္တူ ကို မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မကိုက်ပါဘူး လို့ ရဟန်းရှင်လူ အပေါင်း ကန့် ကွက် ဆန့် ကျင်လိုက် ကြတာ တော်တော် လေး တသောသော ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ် ။ အခု မျက်နှာဖြူ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ အမျိုးသမီးကိုမြန်မာ ပြည်သူတွေ ထောက်ခံနေကြတာ တော်တော် လေးကို အံသြဖို့ ကောင်းပါတယ် ။
ဒေါစုနှင့် မျက်နှာဖြူ ကလေးများ
အမေစု အမေစု ခေါ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင်ကြီး
နိုင်ငံရေး သမားတွေ ဟာ ထောင်ကျတာ ကိုသိက္ခာထပ်တယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ် ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ထောင် တခါကျ ရင် နိုင်ငံရေး ပါဝါတခါတက်တယ် ဆိုပဲ။ ဟုတ်လဲဟုတ်လောက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် သိရသလောက် မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်ပေး ခဲ့တာဆိုလို့ ဘာမှ မရှိ သေးပါဘူး ။ သူ့ကြောင့် နစ်နာ ခဲ့ရတဲ့ လူတွေပဲတွေ့ ဖူးပါတယ် ။ 1980 ကျော်လောက်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ ကိုရောက်ပြီး 88 ကျောင်းသားအရေး နဲ့တွေ့တော့ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းသွားတာ က ဒေါ်ဒေါ်စုပါ ။ ထောင်ထဲ့ ကို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ နိုင်ငံရေး ပါဝါတွေတက် .နိုဘယ်ဆုပါ ရသွားခဲ့ပါတယ် ။
2008 ဖွဲ့ စည်းပုံကို ဆန့် ကျင်တာလဲ သူပါ။ အခု လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်တာလည်းသူပါ။ မြန်မာ နိုင်ငံ ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ တော့ မသိပါ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လဲ ALD ကရွေးကောက်ပွဲ ၀င်လာတော့မှာ ပါ။ 2010 မှာ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ နိုင်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေး ပါတီ (RNDP) နဲ့ ဆိုရင် နှစ်ပါတီဖြစ်လာတော့ မှာ ပါ။ကြားနေရတာ ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပါ NLD က ရုံးတွေ လာဖွင့်မယ် ပါတီဝင်တွေ စုဆောင်း ပါမယ်တဲ့။ ဒိလို ရခိုင်တွေ ဝေစုခွဲနေတာနဲ့တင် ဘေးနား မှာ ရှိတဲ့ လဒ က ၀င်အုပ် သွား မှာ ကို လဲ စီုးရိမ်ရပါတယ်။ အမေကျော် ပြီး ဒွေးတော် မလွမ်းကြပါနဲ့ ။
အချုပ်တန်းဆရာဖေ လည်းပြောခဲ့ပါတယ် “အမေကျော် ဒွေးတော် လွမ်း
ခွကောင်တွေ ခွေးဖြစ်ပေါ့ ဗျို့ ”
ရခိုင်တွေ ဒွေးတော်လွမ်းလို့ ခွေးဖြစ်ရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းလဲ မနည်းတော့ ပါဘူး ၊ ဒိတစ်ခါ ဒွေးတော် လွမ်းမိရင်တော့ ခွေးဖြစ်စရာနေရာကို ရှိတော့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အမျိုးစစ်မှ အမျိုးချစ်မှာ ပါ။ အမျိုးစစ်တဲ့ လူမှ အမျိုးအတွက်လုပ်ပေးနိုင်မှာ ပါ။ လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်လည်း ရှိမှာပါ ။ ဒွေးတော်ကို မလွမ်းကြပါနဲ့ လို့ ။
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ(၅၀၀၀) တန်ဖုန်းကတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများသို့ အသိပေးတင်ပြခြင်း
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ(၅၀၀၀) တန်ဖုန်းကတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများသို့ အသိပေးတင်ပြခြင်း
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး ၏ ၅၀၀၀ တန် ဖုန်းကတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်
ယခုအချိန်တွင် မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့ ခင်ဗျာ ။ ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်လာမှာလဲဆိုတာက စဉ်းစားစရာပါ။ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ မီလီယံနာတွေ ဖြစ်တဲ့ အချိန်လား ? ။ဘင်္ဂလားဒေခ်ျရ် နိုင်ငံမှာတောင် ဆင်းကတ်(၁)ကတ်ကို မြန်မာငွေ 3000 နီးပါးပဲကျပါတယ် ။ TK 50-100(မြန်မာငွေ 1000) လောက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဖုန်းလည်းပြောနိုင်တယ် အင်တာနက်ပါသုံးနိုင်ပါတယ် ။လူတိုင်းဖုန်းကိုင်နိုင်တယ် ။အဆုံးစွန်ပြောရရင် ဆိုက်ကားသမားတွေ တောင် ဖုန်းတွေနဲ့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ CDMA ကတ်တကတ်ကို (၅)သိန်း ဆိုတာ ရှိတဲ့ သူတွေအတွက် မပြောလိုပေမယ် .၀န်ထမ်းတွေ လူလတ်တန်းစားတွေ အတွက် ဟမ်းဖုန်းကိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ အိပ်မက် တစ်ခု လိုပါပဲ။ (၅၀၀၀) တန် ဖုန်းတွေ ထွက်မယ် ဆိုလို့ လူတွေ ပျော်နေကြ မျှော်နေကြတာပါ။ ခုတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ ။ဘယ်အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက်တွေ ပြည်စုံလာ ပါ့မလဲ။ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျရ် လို နိုင်ငံမှာတောင် ဖြစ်နိုင်နေတာ လုပ်နိုင်နေတာ ကို မြန်မာ နိုင်ငံ မှာမှ ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင် ရတာပါလဲ။ မဖြစ်နိုင်သေးပါ ဟု ပြောရတာပါလဲ။
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	ဘာသာစကားလေတိုက်စားခြင်း
ကမ်းပါး များ ရေတိုက်စားခံရပါက တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးကုန်ကြသည်။ ထို့အတူ ဘာသာစကားငယ်များ အင်အားကြီး
ဘာသာစကားများ ကလွှမ်းမိုးခံ နေရသည်ကို လေတိုက်စားသည် ဟု ပင်သုံးလိုက်ချင်ပါသည်။ ကမ္ဘာတွင် ထိုသို့လွှမ်းမိုး ခံရ မှုကြောင့်မှတ်တမ်း မတင် လိုက် ရဘဲ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရ သည့် ဘာသာစကား
အများအပြားပင်ရှိသည်။ယခုအခါသတင်းနည်းပညာပိုမိုထွန်းကားလာခြင်းနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုလွယ်ကူလာခြင်း တို့ ကြောင်းကမ္ဘာ့ရွာ(Global Village) ဟုပင် တင်စား ခေါ်ဝေါ်နေကြ ပေပြီ။ ထိုသို့ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာ မှု နှင့်အတူဆုတ်ယုတ် မှုများ ကိုလည်းတချိန်တည်းတွင်ပင် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိုအထဲ့တွင် ဘာသာစကားများ ကွယ်ပျောက်ကုန်ခြင်းသည် အရေးကြီးသည့်အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြောဆိုသုံးစွဲလျက် ရှိသော ဘာသာစကား ပေါင်း ၇၀၀၀ အနက် ထက်ဝက်ကျော် မှာ
လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမည့်အန္တရာယ်ကြုံ နေရသည်။ (၁၄) ရက်တိုင်းတွင် ဘာသာစကားတစ်မျိုး ပျောက်ကွယ်လျှက် ရှိသည်။
ပျောက်ကွယ်ရသည့် အကြောင်းအရင်း များမှာ တရားဝင်ရုံးသုံး ဘာသာစကားတစ်မျိုးကို အသုံးများသည့်အခါ နှင့် ကလေးများက
မိဘများပြောဆိုသုံးနှုန်းသည့်မိခင်ဘာသာ စကားကို လေ့လာသင် မှု ရပ်လိုက် သည့်အခါ တွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကား
များသည် လူအုပ်စု တစ်စုကို ထိန်းချုပ်သည့် ပုံသဏ္ဌာန်တစ် ရပ်အဖြစ် ကိုယ်စားပြုတတ် သည်။
လူ့သမိုင်းစဉ် တစ်လျှောက် တွင် အင်အာကြီးသော အုပ်စုတစ်စု က သုံးနှုန်းပြောဆိုသည့် ဘာသာစကားသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခုလုံးသို့ပျံ့ နှံ့သည်။ အင်အားကြီးသော ယဉ်ကျေးမှုက တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု များ၏ ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို အလေးထားခဲ
လှသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အင်အားကြီးသော ဘာသာစကား က ပို၍ ခိုင်မာအင်အား ကောင်းစွာဖြင့် လွှမ်းမိုး လာသော အခါ လူနည်းစု
လူမျိုးစုယဉ်ကျေးမှု များအဖို့ ၎င်းတို့၏ မိခင်ဘာသာစကား ဝေါဟာရ ဆုံးရှုံးကွယ်ပျောက် ရတော့သည်။ သာဓက ပြရလျှင် ဆားဘီးယားရှိ
ဒေသခံတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားအတော် များများ လုံးဝကွယ် ပျောက်မည့် ဘေးနှင့်ကြုံ နေရ သည်။ အဓိက အကြောင်းအရင်း မှာ ရုရှ
ဘာသာစကား ကို တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကား အဖြစ် မဖြစ် မနေ အသုံးပြုရန် အဓမ္မ ဆောင်ရွက်ခဲသော ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဟောင်း
ခေတ်က ဘာသာစကားမူဝါဒ ကြောင့်ပင်ဖြစ် သည်။
မာဂါတီဂေး(Magati Ke) ကဲ့သို့သော ဘာသာစကားအချို့ဆိုလျှင် သုံးနှုန်းပြောဆို သူ သုံးဦးမျှ သာကျန်တော့သည်။
ထိုဘာသာစကား ကိုအသံသွင်းယူပြီး ပြတိုက် ထဲ့ ထားရုံမှ လွဲ၍ဘာမှ တတ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ ဤသို့ ဘာသာစကားများ
ပျောက်ကွယ်ရခြင်းသည် အစားထိုးမရနိုင် သည့်ဆုံးရှုံး မှုကြီးဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားများ တွင်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု၏ သမိုင်း ၊
အတွေးအခေါ်များ နှင့် သုတပညာ တို့ပါဝင်သည်။ ဘာသာစကား များတွင် ဒေသတွင်းတွေ့ ရှိသည့်ဆေးဝါးများ ၊သိပ္ပံပညာရှင်များမသိ
ရှိသေး သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ စနစ်များ ၊ အပင်များ နှင့် သတ္တ၀ါများအကြောင်းတို့ နှင့်ဆက်စပ်၍ တန်ဖိုးရှိလှသော
သတင်းအချက်အလက် အမြောက်အမြား လည်းပါဝင်သည်။
ထိုသို့တန်ဖိုးရှိလှသော ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားများ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင်ဘာသာစကား သည်လည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
ရခိုင်စကားသည် ဘီစီ ၆၀၀၀ လောက်မှစတင်၍ ဖြစ်ပေါ်ထွန်းကားလာခဲ ပြီး ယနေ့တိုင် ရခိုင်လူမျိုး တို့ပြောဆိုသုံးစွဲ နေတုန်းဖြစ်
သည်။သို့ရာတွင် ဘာသာစကားဟူ သည် အချိန်ကာလ အလိုက် အနည်း နှင့် အများဆိုသလို ပြောင်းလဲကြစမြဲ ဖြစ်ရာ ရခိုင်စကား
သည်လည်း သမိုင်းဘီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်း မှုများ နှင့်ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်း ရသောအခါ စကား၏သဏ္ဌာန် သည်ပြောင်းလဲလာသည်။ သာဓက
အားဖြင့်စက်ဝိုင်းပုံ မှ ဘဲဥ သဏ္ဌာန် လေတိုက်စား ခံရသည် ဟု ဆို နိုင်သည်။ ယခင်ကပင် အရှေ့ပြည်မ နှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
အဆင်ပြေ ခဲ့သည့် ရခိုင်ဒေသအချို့ တွင် စကားလေတိုက် ခံရ မှု ကို ပိုမို တွေ့ ရ သည်။ ယခုအခါ ပြည်နယ်မြို့တော် စစ်တွေ တိုင်အောင်
ပြည်မ နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာနေ ပြီဖြစ် ရာ စကားလေတိုက် စား ခံရ နိုင်ဖွယ် ရာရှိ လာနေပေပြီ။ လက်ရှိအခြေအနေ၌
ပင် ရခိုင်လူငယ်အများ အပြား မူရင်းရခိုင် ဝေါဟာရများကို မသုံး ၊ မသိဖြစ်လာနေသည်။ ရခိုင်လို “ချတုံချေ”( ဗမာလို “မြီးကောင်ပေါက်”) ၊
ရခိုင်လို “တန်းရွှင်” ( ဗမာလို “ရေတံခွန်”) ၊ ရခိုင်လို “လုံးချင်းတည်း” (ဗမာလို “တစ်ကိုယ်တည်း”(သို) “တစ်ယောက်တည်း”) စသည်ဖြင့်
အများအပြား မသိကြတော့ချေ။ ထိုသို့ မိခင်ဘာသာစကား ဝေါဟာရများ မသိမှုများလာ သောအခါ စက်ဝိုင်း ပုံ မှ ဘဲဥ ပုံ ၊ ထိုမှသည်
ရေခဲအရည် ပျော်သလို ပျောက်ကွယ်သွား မည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့အသွင် ပြောင်းလဲ မှု မှသည် ကွယ်ပျောက်မှုအထိ မရောက်စေရန် မိခင်ဘာသာစကား ဖြစ်သည့် ရခိုင်ဘာသာစကား ကို
တန်ဖိုးထား ဂုဏ်ယူပြောဆိုကြ ရပေမည်။ ကိုယ့်ဘာသာစကားကို ဂုဏ်ယူတန်ဖိုးထား တတ်မှု သည် သမိုင်းအစဉ်အလာ ကို နားလည်သိရှိ
ထားခြင်း နှင့်ဆက်စပ်ပေရာ မိမိလူမျိုးသမိုင်းကို လေ့လာ ရန်လို အပ်သည်။ သမိုင်းကို နားလည်ထား မှ မိမိ ရခိုင်လူမျိုး တို့၏ ဗီဇစရိုက်
လက္ခဏာ များ မပျောက် မပျက် အောင် ဂုဏ်ယူထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောင့် ရကောင်းမှန်း သိလာနိုင်သည်။
ဘာသာစကားသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ် ရာ ဘာသာစကားလေ တိုက်စားခြင်းမှကာကွယ် ရန် တခြားဘာသာစကားများမှဆွဲသုံး
ဝေါဟာရ များကို ရှောင်ကြည် အပ်ပေသည်။ ကိုယ်ပိုင် ရခိုင်စကားတွင်မရှိ ၍ ချေးငှါး (Borrowed Words) ဝေါဟာရများ ကို သုံးစွဲရခြင်း
သည်ကား မတတ်သာ၍ သာ လက်ခံကြရခြင်းဖြစ် သည်။
ဘာသာစကားကိုအခြေခံ၍ စာပေဖြစ်ပေါ်လာ ရသည်ဖြစ်ရာ စကားပျောက်လျှင် စာပေလည်းမရှိ နိုင်ပေ။ တနည်းဆို ရလျှင် လူမျိုးပါ
ပျောက်ကွယ်ရ ခြင်းဖြစ် သည့် အတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ လေတိုက်စားခြင်းခံ နေရ သော ရခိုင် စကားများ အား စီမံကိန်းချ မှတ်၍ မလွဲမသွေ
အကောင်အထည် ဖော် နိုင်ပါ မှ ပီပြင်သော ယခင် ရခိုင်စာပေ နှင့် ပီပြင်သော ယခင် ရခိုင်စကား ရခိုင်ပြည်နယ်တ၀ှမ်းလုံး တွင် တပြေးညီပြန်လည် ရွှက်နုပြန် သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာ မည်ဖြစ် ပေ သည်။
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	ရခိုင်သယံဇာတ ရွှေဓါတ်ငွေ့ကို အသုံးပြု၍ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အပြည့်အ၀ရရှိရေး အတွက် ရခိုင်ပြည်သူ သို့ တင်ပြခြင်း(RNDP)
ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ရရှိရေးအဖွဲ့ (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ) RNDP
အကြောင်းအရာ။	။ရခိုင်သယံဇာတ ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို အသုံးပြု၍ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အပြည့်အ၀ရရှိရေး အတွက် ရခိုင်ပြည်သူသို့ တင်ပြခြင်း
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အတွင်းရှိ ရခိုင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် အမှတ် A-1 နှင့် A-3 မှသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ များကို DAEWOO Intrnational Corporation က ၁၉-၂–၂၀၁၁ နေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ စတင် တူးဖော် ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ထွက်ရှိလာသော သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ များကို ရခိုင်ပြည်နယ် သားများ လုံးဝ သုံးစွဲ နိုင်ခွင့် မရနိုင်ပါ။ ထိုဓါတ်ငွေ့ များကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပိုက်လိုင်းဖြင့် ပို့ လွှတ်ရောင်းချ ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် သုံးစွဲရန် ၁၉၀-၉-၂၀၁၁ ရက်နေ့ (ပထမ အကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်) ဒုတိယ ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၂၀) ရက်မြောက်နေ့တွင် အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးက အတိအလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ရခိုင်သယံဇာတ ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကိုအသုံးပြုခွင့် ရရှိရေး ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး ဈေးနှုန်းချို သာစွာ ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၂၄ နာရီစဉ်ဆက်မပြတ် သုံးစွဲ နိုင်ရန် နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်လုံး ဖွံ ဖြိုး တိုးတက်စေရန်အတွက် “ဤစာတမ်း” ကို “ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေးအဖွဲ့” (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ) မှ ရခိုင်ပြည်သူသို့ လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
(ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပေးရေးစီမံကိန်း) အတွက် (ဓါတ်အားဖြန့် ဖြူးခြင်း စနစ် အဆိုပြု ပုံစံ) ကိုလည်း ပူးတွဲ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ တူးဖော်ထုတ်လုပ်မှု လက်ရှိအခြေအနေ
ရခိုင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် အမှတ် A-1 နှင့် A-3 (ရွှေစီမံကိန်း) ၏ ပထမအဆင့် ဖွံဖြိုးရေး တွင်းဖြစ်သည့် မြ(မြောက်) ဖွံ့ ဖြိုးရေး အမှတ် (B) ကို စတင်တူးဖော်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၉-၂-၂၀၁၁ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ (နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး ကောင်စီ) စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးလွန်းသီ ၊ ဒု-၀န်ကြီးဦးသန်းဌေး နှင့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ် များ၊ DAEWOO Co.Ltd မှ Senior Vice President Mr.Si Bo. Joo နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ (ယင်းနောက် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးက) ဖွံ့ ဖြိုးရေးတွင်းအမှတ် (B) ကိုစက်ခလုပ်နှိပ် ၍ စတက်တူးဖော်ပေးခဲ့ပါသည်။
၂၈-၉-၂၀၁၁ နေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးသန်းဌေး၊ ဒု-၀န်ကြီး ဦးစိုးအောင် ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင် တို့ သည် မြ (မြောက်) ဖွံဖြိုးရေး တွင်းအမှတ်(B) ရှိ တွင်းတူးစင်ပေါ် သို့ ရောက်ရှိလာရာ DEAWOO မှ Senior Vice President Mr.Si Bo Joo မှ မြ(မြောက်) ဖွံ့ ဖြိုးရေးတွင်းများ တူးဖော် မှု ရှေ့ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ၀န်ကြီးက လိုအပ်သည် များကို ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် တို့က တွင်းအမှတ် မြ(မြောက်) (B) ၏ (သဘာဝဓါတ်ငွေ့ မီးရှို့ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ရေး ခလုပ် ) ကိုဖွင့် ၍ အောင်မြင်စွာ မီးရှို့ စမ်းသပ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။
ရည်ညွန်းချက် ။	။၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့ အလင်း သတင်းစာအတွဲ(၅၀) အမှတ်(၁၄၃) နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ အတွဲ (၅၀) ၊ အမှတ် (၃၅၉)
အထက်ပါအချက်များကို ကြည်၍ ရခိုင်ကမ်းလွန် ဒေသရှိ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက် A-1, A-3 (ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်း) မှ ရခိုင်သယံဇာတ “ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ” ကို စတင်ထုတ်လုပ်ပြီး (ရောင်း/၀ယ်) ရန် အသင့် အနေအထားတွင် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရခိုင် ကမ်းလွန် လုပ်ကွက် အမှတ် A-1 နှင့် A-3 ရှိ ရွှေ ၊ရွှေဖြူ နှင့် မြ ဘူမိ အနေအထားတို့ တွင် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ခိုအောင်းမှု ပမာဏ စုစုပေါင်း ၅.၀၀ ထရီလီယံ ကုဗပေ မှ ၉.၀၀ ထရီလီယံ ကုဗပေ အထီရှိကြောင်း ကျွမ်းကျပ် ပညာရှင် များ၏ ခန့် မှန်းတွက်ချက် ထားမှု ကို သိရှိရပါသည် ။
(၁ ဘီလီယံ = သန်းတစ်ထောင် ၊ ၁ ထရီလီယံ = ၁၀၀၀ ဘီလီယံ)
ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ထွက်ရှိလာမှုကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ စီမံ ခန့် ခွဲမှု အခြေအနေ
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ဘင်္ဂလာပင်လယ်အော်အတွင်းရှိ “ ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လုပ်ကွက်များ A-1 နှင့် A-3 မှထွက် ရှိ သည့် SHWE GAS များအနက် (ဓါတ်ငွေ့ ၁၂ ဘီလီယံ ကုဗပေ) ကို တရုတ်နိုင်ငံ သို့ နှစ်စဉ် ရောင်းချရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
ထိုရောင်းချ မှုမှ (ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းခ နှင့် ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းချမှု) နှစ်တစ်နှစ် လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ သန်းတစ်ထောင်) အနည်းဆုံး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ထိုဓါတ်ငွ့ ဈေးကို ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေးနှင့် အညီဖြစ်စေရန် (၃ လလျှင် ၁ ကြိမ်) ညှိနှိုင်း မည်ဟု DAEWOO မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြောဆိုထားသည်။
သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့ တွင်စတင်ပြီး တရုတ် ပြည်သို့ (မြန်မာ-ယူနန်) နယ်စပ်တွင် ရွှေလီမြို့ မှ တဆင့် ၀င်ရောက် မည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ ကျိုး နှင့် ကွမ်းရှီး ပြည်နယ် များအထိ မိုင်ပေါင်း ၁၇၅၃ မိုင်( 2804 KM) ရှည် လျားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ၏ စွမ်းအင် လုံခြုံရေးသည် တရတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားလုံခြံရေး ဖြစ်နေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ် နိုင်ငံ စီးပွားရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ လုံခြုံရေး သည် အသက်သွေးကြော သဖွယ် ဖြစ်နေချိန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် မိမိ၏ အသက်သွေးကြော ဖြစ်သည့် စွမ်းအင် လမ်းကြောင်းများကို တခြားနိုင်ငံ တစ်ခုမှ ဖြတ်သန်းခြင်းသသည် များစွာ စွန့်စား ရသော်လည်း (မြန်မာ နှင့် တရုတ်) ၏ (ပထ၀ီ အနေအထား နီးကပ်မှု ) နှင့် (နိုင်ငံရေး အရနီးစပ်မှု) တို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အကောင်အထည် ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် ။
ဤကဲ့သို့ (ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်း) ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ကြောင့် ရရှိလာသော (Geoeconomics Benefits) (ပထ၀ီ ၀င်စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် များ) သည် တရုတ်နိုင်ငံ အတွက် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အကျိုး ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ (ယခင်နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ) နှင့် (ယခုပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ) တို့ အတွက်လည်း ပမာဏ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အကျိုးရှိ ပြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ် တို့ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်သူလူ ထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် မည်ကဲ့သို့ သော တန်းတူညီမျှမှု (Equality) နှင့် ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု (Development) ကို ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍ ရရှိပါသနည်း ဆိုသည်ကို ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက် ပထမအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် /ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်းအဝေး တွင် အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး က အောက်ပါ အချက်များ ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
(၁)	ရွှေစီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့များကို ရွှေစီမံကိန်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၀င်များနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ (CHINA NATIONAL UNITED CORPORATION) တို့ အကြား “သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ၀ယ်ယူရေးစာချုပ် ” ကိုသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြပြီး ကတိက၀တ်ပြုပြီးလည်းဖြစ်သည်။
(၂)	ယင်းစာချုပ်မှာ (မြန်မာနိုင်ငံက ပမာဏ မည်မျှသုံးစွဲမည် / တရုတ်နိုင်ငံ သို့ မည်မျှရောင်းချမည်) တို့ကို စီမံကိန်း ကာလ အနှစ် ၃၀ (နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်) အတွက် ကတိက၀တ်ပြုထားပြိးဖြစ်သည်။
(၃)	ရခိုင်ကမ်းလွန် ရွှေစီမံကိန်း မှ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ များ ကို နိုင်ငံတော် ၏ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံးစွဲနေမည့် စက်မှုကဏ္ဍများသို့ ဦးစားပေး ပို့ လွှတ်မည်။
(၄)	ရွှေစီမံကိန်းမှ ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် အတွက် တစ်နေ့လျှင် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကုဗပေ သန်း(၁၀၀) ကို ပြည်တွင်း သုံးနေရာ တွင် ရယူရန် စီစဉ်ထားသည်။
အထက်ပါ အချက်(၄ )နှင့် ပတ်သက်၍ The voice weekly Journal vol.7, No.19 Mon-day; April 25th May 1st 2011 ရန်ကုန် ဧပြီ-၅၊ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။
(ယင်းဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်း ကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် နေပြည်တော်ဒေသခံများ အတွက် လျှပ်စစ် နှင့် အခြားစွမ်းအင်များလွယ်လင့် တကူ သုံးစွဲ နိုင်ရန် ရည်ရွယ် ထားသည်။ ယင်း ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကို ရွှေသဘာဝ လုပ်ကွက်မှ သွယ်တန်း ကြောင်းကို (နေပြည်တော် ရှိ စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန) မှ (လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေး မှူး တစ်ဦး ) က Voice Weekly သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘလ (၁၉) ရက်နေ့ (ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွတ်တော်/ ဒုတိယ ပုံမှန် အစည်း အဝေး ) တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မဲ ဆန္ဒနယ် (၂) အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်၏ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန် (ကျောက်ဖြူ ကမ်းလွန် သဘာဝဓါတ်ငွေ့) ကိုအခြေပြု ၍ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် မဟာ ဓါတ်အား လိုင်း ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် (အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ) မေးခွန်းကို -
အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၀န်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ သည် ။
(ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ပြည်သူများ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား အပြည့် အ၀ အသုံး ပြု နိုင်ရေး အတွက် (သူဌေးချောင်း ၊စိုင်းဒင် ၊လေးမြို့ ၊ အမ်း) စသည့် ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ လေ့လာ ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါကြောင်း)
အဆိုပါ စီမံကိန်း များမှ ထွက်ရှိ လာမည့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပမာဏ သည် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ် ဓါတ်အား လုံလောက်စွာ အသုံးပြု နိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ပိုလျှံ သည့် ဓါတ်အား များကို နိုင်ငံတော် ဓါတ်အား စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပို့ လွှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ။ ယင်းစီမံကိန်းများ နှင့် ဆက်စပ် ၍ (230 KV) မဟာ ဓါတ်အား လိုင်းကြီးများ ၊ ပင်မ ဓါတ်အားခွဲ ရုံကြီးများ ဆည်ဆောက် ကာ ဓါတ်အား ကွန်ယက် တစ်ခု တည်ဆောက် ရန် စီမံကိန်း များ ချမှတ်ဆောင် ရွက်နေပါကြောင်း နှင့် (လိုအပ်သည့် အခြေအနေ ရှိမှသာ) သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် စီမံဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားသွား ခဲ့ ပါသည် ။
ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်း အဝေး ၂၆ ရက်မြောက် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် ကျောက်ဖြူ မဲဆန္ဒမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန် ၏ မေးခွန်းကို စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာ န ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးသန်းဌေး က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည် ။
ရည်ညွန်းချက်။	။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် နေ့ မြန်မာအလင်း သတင်းစာအတွဲ (၅၀) အမှတ် (၃၇၅) မေး( ဦးဘရှိန်) ။	ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူ မြို့ ၏ မြောက်ဘက မိုင် ၂၅ မိုင်ခန့် အကွာ ရှိ ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ တွင်းများ မှ ဓါတ်ငွေ့ များကို မြို့ ၏ အနောက်တောင်ဘက် ၆ မိုင်ခန့် အကွာ ရှိ မလကျွန်း ကျေးရွာ အနီးရှိ တည်ဆောက်နေသည့် စက်ရုံ မှ သန့် စင်ပြီး သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ တစ်စုံတစ်ရာကို အသုံးပြု ၍ ကျောက်ဖြူ မြို့ အတွက် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပေးမည့် လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ နှင့် နိုင်ငံတော်၏ မဟာဓါတ်အားလိုင်းများ မှ ကျောက်ဖြူ မြို့ အတွက် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ သိလိုကြောင်းမေးမြန်းပါသည်။
ဖြေ(ဦးသန်းဌေး) ။ကျောက်ဖြူမြို့ မှ ၆.၄ မိုင်ခန့် အကွာရှိ မလကျွန်းကျေးရွာ အနီး သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ လက်ခံစခန်းမှ သန့်စင်ပြီး ဓါတ်ငွေ့များကို မြန်မာ-တရုတ် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းအတွင်းသို့ ပို့လွှတ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။ ယခု အချိန်အတွင်မှ နောက်စီမံ ကိန်းတစ်ခုအတွက် စာချုပ်ကို ဆန့် ကျင်၍ ဓါတ်ငွေ့ အသုံးပြု ရန် မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ။
(သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ၏ ကနဦး မတည် ရင်းနှီး စရိတ်သည် ရေအား လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ ၏ ကနဦး မတည်ရင်းနှီး စရီတ်ထက် သက်သာသော်လည်း လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှု အတွက် လောင်စာ ဓါတ်ငွေ့ အသုံးပြု သဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်သည် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်မှုထက် အလွန်များပြား ပါကြောင်း။
ထို့ကြောင့် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် အလားအလာရှိသော ဒေသများတွင် အများအားဖြင့် ရေအား လျှပ်စစ် စက်ရုံ များကိုသာ တည်ဆောက်လေ့ ရှိပါကြောင်း ။
ယခုအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်သူများ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အပြည့်အ၀ အသုံးပြုနိုင် စေရေးအတွက် (သူဌေးချောင်း ၊ အမ်း၊ လေးမြို့ ၊ စိုင်ဒင်) စီမံကိန်း များကို ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်းများ များချမှတ်ထား ပြီးဖြစ်သည်ကို အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာနမှ တဆင့် သိရှိရပါကြောင်း ထို့ အပြင် အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာနအနေနှင့် လည်း အဆိုပ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ နှင့် ဆက်စက်၍ (230 KV) မဟာဓါတ်အား လိုင်းကြီးများ ပင်မ ဓါတ်အားခွဲ ရုံ ကြီးများတည်ဆောက်ကာ ဓါတ်အား ကွန်ယက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရန် စီမံ ကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရပါကြောင်း။
သို့ဖြစ်ပါ၍ လောလောဆယ် ရွှေစီမံကိန်းမှ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ကို ကျောက်ဖြူမြို့ တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေးအတွက် ပြောင်းလဲ သုံးစွဲရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါကြောင်း၊ နောင်တွင် ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသမှ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့များ ထပ်မံတွေ့ရှိ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အချိန်တွင် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေရှိသေးပါက ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
ထို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ မတည်ဆောက်မီ ကြို တင် လေ့လာ ဆန်းစစ်မှုများ ၊တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၂ နှစ်မှ ၃ နှစ်ထိ ကြာမြင့်နိုင်ပြီး နောက်ထပ်တည်ဆောက်ရေး ကာလအနေဖြင့် ၅ နှစ်ခန့် ကြာမြင့် မည်ဖြစ်သည်။ ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံတစ်ခု ပြီးမြောက်ရန် လုပ်ငန်း ကိစ္စ အ၀၀ အဆင်ပြေ ချော မွေ့မှသာ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်ထိ ကြာမြင့် နိုင်သည်။ ထို့ ကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူ တို့ အနေဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်မှ ဓါတ်အား ရရှိရန် အစောဆုံး ဆယ်စု နှစ်တစ်ခု မျှ စောင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ (သို့သော် ဒဏ္ဍရီ ထဲ့မှ ဖြစ်ပျက် သဘော ရှိသည့် စိုင်းဒင် စီမံကိန်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်သူတို့ သည် ရေအား လျှပ်စစ်ကို အယုံအကြည် မရှိတော့ပါ)။
ရည်ညွန်းချက် ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၃၀) မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ အတွဲ(၅၀) အမှတ်(၃၅၉) ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် / ဒုတိယ ပုံမှန်အစည်း အဝေး ၂၇ ရက်မြောက်နေ့ တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် (၁) မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်က လေးမြို့ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် စိုင်းဒင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတို့ ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ် ပျက်စီးထိခိုက်မှုနှင့် အကျိုးပြုမှု လေ့လာဆန်းစစ်သည့် စာတမ်းအား ပညာရှင်အဖွဲ့ ဖြင့် ကောက်ယူမှုရှိပါက ဒေသခံပြည်သူများ သိရှိအောင် ထုတ်ပြန်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ ၊ အစီရင် ခံစာအရ ကျိုးကြောင်း ခိုင်လုံသဖြင့် စီမံကိန်းစတင်မည် ဆိုပါက စတင်မည့် ကာလ၊ ပြီးစီးမည့် ကာလနှင့်၊ ဓါတ်အား သုံးစွဲမှု (အစီအစည်ကို သိရှိလို မှု)၊ လေးမြိုနှင့် စိုင်းဒင် ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း တို့ ကာလ ကြာရှည်မည်ဆို လျှင် ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့သိုက်မှ ဓါတ်ငွေ့ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တ၀ှမ်း ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက် ပေးရန် ရှိ/ မရှိ ၊ ပြည်ထောင်စု မဟာ ဓါတ်အား လိုင်းမှ တဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့  များ သို့ ဓါတ်အားပို့ လွှတ်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/ မရှိ ၊နှင့် မရှိပါက ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ စက်မှု ဖွံ့ ဖြိုးမှု ကဏ္ဍ ကို အကောင်အထည် ဖော်မည့် အစီအမံ ကို သိရှိလိုပါကြောင်း မေးခွန်း မေးမြန်းသည်။
အဆိုပါမေးခွန်းကို အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း ကအောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားသည်။
လေးမြို့ နှင့် စိုင်းဒင်ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ ၏ ပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှု နှင့် အကျိုးပြု မှု လေ့လာချက် အစီရင် ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှ လေ့လာဆောင်ရွက်ပြီး ပါက အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာနမှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနသို့ ဆက်လက်အပ်နှံပြီး ၄င်းတို့ မှ လေ့လာစီစစ် သုံးသပ်၍ အတည်ပြု သည့် အခါ အဆိုပါ အစီရင် ခံစာကို ပြည်သူများ ဖတ်ရှုနိုင် ရန် ထိုအချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် သက်ဆိုင်ရာ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း၏ Website တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။
ထိုစီမံကိန်းများသည် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ/ မရှိ စူးစမ်းလေ့ လာနေဆဲ ဖြစ်ပြီး စတင်တည်ဆောက်သော အချိန်မှ စ၍ ၅ နှစ် မှ ၈ နှစ် အကြား တည်ဆောက် ချိန် ကြာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။
ထွက်ရှိလာသော ဓါတ်အားကို ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြန့်ဝေ မည့်အပြင် မဟာဓါတ်အား လိုင်းနှင့် ဆက်သွယ်၍ အမှတ်(၂) လျှပ်စစ် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။
ကနဦးမတည် ရင်းနှီး စရိတ် နှင့် ပတ်သက်၍ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ ၏ စရိတ်သည် ရေအား လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ ၏ စရိတ်ထက်သက် သာသော်လည်း လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှု စရိတ်သည် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံများ တွင် လောင်စာ ဓါတ်ငွေ့ ကိုအသုံး ပြုရ သဖြင့် ကုန်ကျစရိတ် အလွန်များ ပြားသော ကြာင့် ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရန် အလားအလာ ရှိသောဒေသများတွင် ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများကို သာ အများအားဖြင့် တည်ဆောက် လေ့ ရှိကြပါကြောင်း။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် နိုင်ငံတော် ဓါတ်အား စနစ်ကို(မတိုးချဲ့) နိုင်ခဲ့သော်လည်း ဒေသအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သုံးစွဲရေး အတွက် နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဒိဇယ်စက်များ တပ်ဆင်ပေးခြင်း လောင်စာဆီများ ထောက်ပံ့ ပေးခြင်း ဖြင့် ပြည်သူများ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား အသုံးပြုခွင် ရရှိပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဒေသတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စီမံနေသည့် (ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် ဆက်စပ် ၍ (230 KV) မဟာဓါတ်အားလိုင်းကြီးများ ပင်မ ဓါတ်အားခွဲ ရုံကြီးများကို (ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ) နှင့် တချိန်တည်း အပြီးသတ်တည်ဆောက်နိုင်ရန် စီမံလျာ ထားလျှက် ရှိပြီး ( အဆိုပါရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်း မပြီးစီးမီ) ရခိုင်ပြည်သူ လူထုမှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို အပြည့် အ၀ သုံးစွဲ နိုင်ရန် ရှေးရှု လျက် (အိန္ဒီယ နိုင်ငံမှ ချေးငွေဖြင့် ဥသျှစ်ပင် တောင်ကုတ် ၊တောင်ကုတ်-မအီ- အမ်း၊ မအီ- စနဲ ခုံမင်းလမ်းဆုံ(ကျောက်ဖြူ) ၊(အမ်း-မန်း) နှင့် (ဥသျှစ်ပင် -တောင်ကုတ်) ၊သူဌေးချောင်း မဟာ ဓါတ်အားလိုင်း များ (တောင်ကုတ် ဓါတ်အားခွဲ စက်ရုံ) နှင့် (မန်းဓါတ်အား ခွဲရုံ) များကို အကောင်အတည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထား ပါကြောင်း ။
ထို့ အပြင် အိန္ဒိယ ချေးငွေ ဖြင့် တည်ဆောက်သော ဓါတ်အား ကွန်ယက်မှ ၄င်း သူဌေးချောင်း၊ လေးမြို့ ၊စိုင်းဒင် စသောရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ မှ ၄င်း ရရှိသော ဓါတ်အားဖြင့် ရခိုင်တပြည်နယ်လုံး မီးလင်း နိုင်ရေး အတွက် (၂၃၀ KV) ဓါတ်အား လိုင်းစုစုပေါင်း မိုင် ၁၁၀ ၊ (66 KV) ဓါတ်အားလိုင်းစုစုပေါင်း ၂၂၃ မိုင် (33 KV) ၊ဓါတ်အားလိုင်း စုစုပေါင်း ၂၇ မိုင် နှင့် ဓါတ်အားခွဲစက် ရုံ ၁၃ ရုံ တို့ ကို ဆက်လက် တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားသွားသည်။
စာမျက်နှာ များတို့တွင် ဖော်ပြထားသော (ရတပ) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် သုံး ဦး ၏ မေးခွန်းများ နှင့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး သုံးဦး ၏ အဖြေများ ကို လေ့လာ ဆန်းစစ် ကြည့် လျှင် ရခိုင်ကမ်း လွန် ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိလာသည့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့များ ကို အသုံးပြု၍ (ရခိုင်ပြည်နယ်) အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရန် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခွင့်ပေး ရန် အစီအစဉ် လုံးဝ မရှိကြောင်းနှင့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ကို ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် လုံးဝ အသုံးပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း သိသာနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ ယနေ့ ကာ လ Electricity (လျှပ်စစ်ဓါတ်အား )တပ်ဆင်သုံးစွဲမှု အခြေအနေ
၁။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲမှု (ယူနစ်သန်း) MILLION UNIT
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား သုံးစွဲမှု = 6.111 (Million Unit)
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံး၏ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား သုံးစွဲမှု=7662.56 (Million Unit)
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ယူနစ်သန်း (million unit) သုံးစွဲမှု %=6.111/7662.56 x100=00.08 %
(၂) ၀န်အားသုံးစွဲမှု MAXIMUM LAOAD (MW)
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ ၀န်အား သုံးစွဲမှု Maximum Load= 8.8 MW
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ၏ ၀န်အား သုံးစွဲမှု Maximum Load= 1273.36 MW
ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ ၀န်အား သုံးစွဲမှု Maximum Load(MW) %= 8.8/1273.36 x100=00.69 %
(၃) စက်တပ်ဆက်အား INSTALLED CAPACITY (MW)
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ စက်တက်ဆင်အား (Installed Capacity)=17.411 MW
(၃၀.၁၂.၂၀၀၉) အထိ မြန်မာတနိုင်ငံ လုံး၏ စက်တက်ဆင်အား (Installed Capacity)=2998.307 MW
ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ ၀န်အား သုံးစွဲမှု Maximum Load(MW) %= 127.411/2998.307 x100=0.58 %
(၄) မီတာအရေအတွက် (Number of Measurement Meters)
ရခိုင်တပြည်နယ် လုံး ၏ မီတာအရေ အတွက် = 27164 No
မြန်မာတနိုင်ငံ လုံးရှိ မီတာအရေအတွက် = 1992477 No
ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ လျှပ်စစ် တပ်ဆင်သုံးစွဲမှု ရာခိုင်နှုန်း = 27164/1992477*100=1.36 %
ရည်ညွန်းချက်။	တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံတော် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု မှတ်တမ်း(၁၉၈၈-၃၁-၁၂-၂၀၀၉)
အထက်ပါ တွက်ချက် တင်ပြထားသော အချက်အလက်များ သည် (၃၁-၁၂-၂၀၀၉) အထိ တည်ရှိသော အချက်အလက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ (ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်) အထက်ဖေါ်ပြပါ ကဏ္ဍလေးခု နှင့် ပတ်သက် ၍ ထူးခြား စွာတိုးတက်လာ စရာ အကြောင်းမရှိပါ တွက်ချက်တင်ပြထားသော (၁) လျှပ်စစ် ဓါတ်အားသုံး စွဲမှု (၂) ၀န်အားသုံးစွဲမှု (၃) စက်တပ်ဆင်အား(၄) မီတာအလုံးအရေအတွက် (လျှပ်စစ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အဓီက ကဏ္ဍ ၄ ခု )ကို လေ့လာဆန်းစစ် ကြည့် လျှင် ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ တပ်ဆင်သုံး စွဲမှု များသည် မြန်မာ တနိုင်ငံ လုံး ၏ တပ်ဆင် သုံးစွဲမှု များ၏ ၁ % အောက် နှင့် ၁% ၀န်းကျင်တွင် သာ တည်ရှိနေကြောင်း တွေ့ နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ရခိုင်ပြည်တယ်တွင် (လျှပ်စစ်ဓါတ်အား တပ်ဆင်သုံးစွဲမှု) သည် အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည့် အတိုင်း (အနည်းဆုံး/ အနိမ့်ဆုံး) အခြေအနေတွင် တည်ရှိနေခြင်းကြောင့် အကျိုးဆက်များအဖြစ် ( ဆင်းရဲ မွဲတေမှု အများဆုံး အခြေအနေ) (ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်အကျ ဆုံး အခြေအနေ ) (လူမှုရေး၊ ပညာရေး ၊ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန် ကဏ္ဍ) စသော နယ်ပယ် အသီးသီး တွင် အောက်တန်းအကျဆုံး အနေအထား (ဥနှောက် ယိုစီးခြင်း) ၊( လူသားအရင်းအမြစ် ဆုံးရှုံး ရခြင်း) များအပါအ၀င် (အဆုံးဝါးဆုံး/အဆင်းရဲဆုံး၊ လူနေမှု အဆင့် အနီမ့်ကျ ဆုံး) အခြေအနေတွင် တည်ရှိခဲ့ သည်မှာ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၃ နှစ်ကျော် ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ အပေါ် RNDP နှင့် ရခိုင်ပြည်သူများ၏ သဘောထားဆန္ဒ
ရခိုင်ပြည်နယ် သယံဇာတ ဖြစ်သော ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ထွက်ရှိမှုမှ ရရှိ လာမည့် အကျိုး ခံစား ခွင့်များ / အသုံးချမှု များကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ စီမံခန့် ခွဲရာတွင် မူလပင်ရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်သူ လူထုအတွက် မည်သည့် (ခံစားခွင့်/ အသုံးချခွင့်) မျှ မရနိုင်ကြောင်း အထက်ဖေါ်ပြပါ စာမျက်နှာတို့ တွင် ဖေါ်ပြထား ပြီးဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ Development (ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက်မှု ) သည်အဘက်ဘက်တွင် နိမ့်ကျလျှက် ရှိပါသည် ။ UNDP ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထုတ်ပြန်သော (မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှု နှင့် ပတ်သတ်သော အညွန်းကိန်း) အရ (ဖွံ့ ဖြိုးမှု အနိမ့်ကျဆုံး ) အဖြစ် (ရခိုင်ပြည်နယ် )သည် ချင်းပြည်နယ် နှင့် အတူ အောက်ဆုံး အဆင့် တွင် ရပ်တည်လျှက် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
အကယ် ၍ ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ထွက်ရှိမှု ၏ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် သုံးစွဲမှု ရရှိမည့် ဓါတ်ငွေ့ ပမာဏ ခွဲတမ်းမှ (ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်) ပြည့်စုံလုံလောက်သော ပမာဏ ကို အသုံး ပြု ခွင့် ရရှိမည်ဆိုပါက ရခိုင်ပြည် နယ်ကျောက်ဖြူ မြို့  တွင် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ ကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
RNDP ၏ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံမှ ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ရရှိရေး (အဆိုပြု ပုံစံ) ကို ပူးတွဲ တင်ပြထားပါသည်။
ထိုသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ် ဓါတ်အားကို ပြည့်ပြည့် ၀၀ ရရှိ မှ သာလျှင် အဘက်ဘက်မှ နိမ့်ကျနေသော ရခိုင် ပြည်သူ လူထု၏ စီးပွားရေး လူမှု ရေး ၊ဘ၀ ကို ကောင်းစွာ မြှင့် တင်နိုင်မည်ဟု RNDP မှ လေးနက်စွာ ယုံ ကြည်ပါသည် ။
ရွှေသဘာဝ ဓတ်ငွေ့ ကို ရခိုင်ပြည်သူလူထု ၏ အကျိုး စီးပွား အတွက် တောင်း ဆိုခြင်းသည် ကုလသမဂ္ဂ ဌာန တိုင်းရင်းသားများ ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး ကြေငြာ စာတမ်း အပိုဒ် (၂၀/၂၆/၂၉ နှင့် ၃၂) တို့ နှင့် လည်း ကိုက်ညီလျှက် ရှိပါသည် ။
ဤရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ သုံးစွဲခွင့် ရရှိရေးသည် ရခိုင်ပြည်သူ တရပ်လုံး ဆင်းရဲတွင်း နက်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင် ရန် အခြေခံ အကြောင်းအရင်း ဖြစ်သကဲ့သို့ (ပြည်ထောင်စု အစိုးရမှ လည်း) မြန်မာ တနိုင်ငံ လုံး တပြေးညီ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ပေး ရန် တာဝန်တရပ် နှင့် လည်း ကိုက်ညီမှု ရှိကြောင်းတွေ့ ရှိရပါသည်။
ရွှေသာဝ ဓါတ်ငွေ့မှ ထွက်ရှိလာမည် ဓါတ်ငွေ့ များကို တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းချမှု နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း စက်မှုရပ်ဝန်းသို့ ပို့ဆောင်မှု တို့ သည်( ၂၀၁၃ မေလတွင် ) ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်သူလူထု၏ ရပိုင်ခွင့် ခံစားခွင့်ဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ် တ၀ှမ်းလုံး လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ရရှိရေး သည်လည်း ယင်းအချိန် နှင့် တပြိုင်တည်း တဆက်တစ်စပ်တည်း ရရှိသင့်သည်ဟု RNDP မှ ယုံ ကြည်ပါသည်။
စာမျက်နှာ (၅/၆ နှင့် ၈) တွင် သုံး သပ်ထားသည့် အတိုင်း (ရတပ ) ပါတီ လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ် (၃) ဦး ၏ မေးမြန်းချက်များ နှင့် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး (၃) ဦး ၏ ဖြေကြား ချက်များ မှ ကျွန်ုပ် တို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့မှ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားကို ခွဲဝေ မရရှိနိုင်ဟု နားလည်မိပါသည်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွက် ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ကို အသုံး ပြု ၍ လျှပ်စစ်
ဓါတ်အား အပြည့် အ၀ ရရှိရေး သည် မိမိ တို့ ၏ အမျိုးသားရေး ကိစ္စ ဖြစ်ပြီး မိမိ တို့ ရခိုင်ပြည်သူ လူထု တရပ်လုံး ၏ ရပိုင်ခွင့် ကို မိမိ တို့ ၏ အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်မှု အင်အား ဖြင့် ဆန္ဒပြု တောင်းဆို မှ သာ လျှင် ရနိုင်မည် ဟု RNDP မှ ယုံ ကြည်ပါသည်။
ထိုယုံကြည်ချက် ကို အကောင်အတည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် RNDP ပါတီနှင့် ပါတီ ပြင်ပမှ အမျိုသား အင်အား စု များ တက်သိ ပညာ ရှင်များ နှင့် ရခိုင်ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ပူးပေါင်း ပါဝင် တောင်းဆို ကြပါရန်လေးစား စွာ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် အပ်ပါသည် ။
ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအဖွဲ့ (ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေးပါတီ) RNDP ထုတ် စာစောင် ကို စာစီ PDF ပြု လုပ်ပြီး ဖြန့်ဝေ တင်ပြသည်။
နှပျောသီး ရှင် အခွံစား လောင်းရှင်တောင် ကြောင်းလားဆိုစွာ ကျွန်တော် ရို့ ရခိုင်စကားပုံပါ ။ ဒေစကားပုံ ကိုပြောနီကတ်၊ ဆိုနီကတ်တေ ကျွန်တော်ရို့ ရခိုင်သားတိ ဘ၀ရေ နှပျောသီးရှင် အခွံတောင် စားခွင့် မရှိရေ ဘ၀ဆိုကေ ဇာလောက် ရင်နာဖို့ကောင်းပါလေ။ ဇာလောက် ရှက်ဖို့ ကောင်းပါလေ။ ၀တ္ထုပြောတိုင်း ယုံနီရ လက်ခံ နီရပါဖို့လား ။အဖ ရခိုင်ပြည်ကြီး ကကျွန်တော် ရို့ အတွက် ပြည့်စုံရေ သဘာဝအဖိုးတန်အရင်း အမြစ်တိ ကို ပိးထားပါရေ ။ အခွင့် အရေးကို ကျွန်တော် ရို့ အမိအရ ဖမ်းဆုပ် ရပါဖို့ ။ ရခိုင်သား တိအတွက် ရသင့် ရထိုက်တေ အခွင့် အရေး ပါ ။ ကမ္ဘာကြီးမှာ ရခိုင်ပြည်တစ်ခုတည်းကို ရာ ကံကွက်ကြား ပြီးကေ မှောင်ထားစွာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရခိုင်သားတိက ရာ အမှောင်ထဲ့မှာ ပျော်နီကတ်စွာရှိပါဖို့ ၊ ကျွန်တော် ရို့ ရခိုင်ပြည် ဇာလောက်ထိဆက်မှောင် နီပါဖို့ သိလဲ ချင့် ………
ရွှေသဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး လျှပ်စစ် ဓါတ်အားရရှိရေး အဖွဲ့
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	Free WordPress Hosting + Domain Name လိုချင်ပါသလား
ငယ်ချင်းတို့ ကို သတင်းပေးတာပါ …။ သိတဲ့လူတွေ ဆို တိတ်တိတ်လေးနေပေးပါ လို့ ..။
ကဲ domain name ကို free လိုချင်တဲ့ လူတွေ မူရင်း ဆိုက်ကိုအောက်က နေ သွား ပြီး ဂလုကြပါလို့။ http://www.wpwebhost.com/2010/09/self-host-your-blog-giveaway/
အာလုံးအဆင်ပြေဖို့ ဆုတောင်းပါတယ် ။
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	ဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ စန္ဒြမဏိ ၏ အတ္ထုပ္ပုတ္တိအကျဉ်း
ဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ စန္ဒြမဏိ ၏ အတ္ထုပ္ပုတ္တိအကျဉ်း
သာ့သနာ့အာဇာနီလောင်းလျာ သူငယ်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ် ပေါက်ပင်ကွင်းကျေးရွာ၌ ခမည်းတော် ဦးကျော်အောင်နှင့် မယ်တော် ဒေါ်မိဝင်ယေ ရို့ မှ ၁၈၇၅ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၅) ရက်၊ ၁၂၃၇ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်(၁)ရက် အင်္ဂါနိန့်တွင် မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်တော်မူခသည်။
မွီးချင်းသုံးဦးအနက် ဆရာတော်သည် အကြီးဆုံး သားကြီးသြရသဖြစ်သည်။ အသက်(၁၂)နှစ် အရွယ်တွင် ဘာကြီးတော်စပ်သူ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တစန္ဒိမာ (စန္ဒိယာရာမကျောင်း၊စစ်တွေ) ထံပါးတွင် သျှင်သာမဏေဘဝဖြင့် ပိဋကတ်စာပီများကို သင်ယူခသည်။ ထိုနောက် မော်လမြိုင်မြို့ ကဒိုးကောဝှပ်ကျောင်း၊ မန္တလေးမြတောင်တိုက်၊ ပတ္တမြားတိုက်၊ ခင်မကန်တိုက်နှင့်၊ ဝိသုဒ္ဒါရုံကျောင်းတိုက် ဆရတော်ဘုရားများထံတွင် ပိဋကတ်ကျမ်းကန်များကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သင်ယူလေ့လာခသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသား အသျှင်အနာဂါရိယဓမ္မပါလ၏ ပင့်ဖိတ်ချက်အရ သျှင်သာမဏေဘဝဖြင့်ပင် ၁၈၉၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (တန်ဆောင်မုန်းလ)တွင် အစိုးရအရာဟိ ဦးသာဒိုးဝေနှင့် ပြည်တွင်းအခွန်အရာဟိတဦး လိုက်ပါပို့ဆောင်၍ အိန္ဒယနိုင်ငံသို့ ရောက်ဟိလာခသည်။ ထိုနောက် ရည်မှန်းချက်ကြီးမားစွာဖြင့် ဟန္ဒီ၊ သက္ကစသော ဘာသန္တရစာပီများကို အားကြိုးမာန်တက် လေ့လာသင်ယူခပြီး ၁၂၆၉ ခုနှစ်၊ တပို့လဆန်း (၉)ရက်နိန့်တွင် ကုန်သည်ကြီး ဦးရွှေစားဦး ဒေါ်မိချမ်းရို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟရို့ဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ ပန်းဝါမြို့တွင် ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ဟိတော်မူခသည်။
ဆရာတော်ဘုရား၏ တသက်တာ အံ့ချီးဖွယ်ရာ သာသနာပြု (ပရဟိတလုပ်ငန်း)များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
٭ ဗုဒ္ဓဘာသာ လုံလုံးလျားလျား ကွယ်ပျောက်နီခသော မိဇ္ဈိမဒေသ အိန္ဒိနိုင်ငံ၌ အခက်ခဲ့ပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်လျက် ဘ၀တစ်ခုလုံးကို နစ်မြုပ်ကာ သာသနာပြုတော်မူခသည်။
٭ ရတနာဂီရိတွင် သီပေါမင်းကြီးနှင့် အိန္ဒိနိုင်ငံ၌ သာသနာရေးကိစ္စများကို အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးတော်မူခသည်။
٭ သံဝေဇနိယဌာနများတွင် အမြော်အမြင်ကြီးမားစွာဖြင့် မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကိုတည်ဆောက်တော်မူခသည်။
٭ ကုသိနာရုံတွင် ဒေသခံများအတွက် အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဒီဂရီ ကောလိပ်ရို့ကို ဖွင့်ပီးခပြီး အခမဲ့ ဆီးပီးခန်းများကိုလည်း ဖွင့်ပီးခသည်။
٭ ဓမ္မပဒ၊ မဟာသတိပဌာနသုတ်၊ အနတ္တလက္ခဏာသုတ်နှင့် သိဂိ င်္တိသုတ်ရို့ကို ဟိန္ဒီဘာသာသို့လည်းကောင်း၊ “သာရောဒယ”နှင့် “အဉ္ဇနနိဒါန်း ”အမည်ဟိ စာအုပ် ရို့ကို သက္ကတဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့လည်းလောင်း၊ ဒေသခံများ သာသနာပြုရာ
တွင် လွယ်ကူချောမွိ့စီရန် အခြားစာ အုပ်များကို ဟိန္ဒီဘာသာသို့လည်းကောင်း ပြန် ဆိုရွီးသားတော်မူခသည်။
٭ ဘိက္ခုသစ္စ၀ံသ၊ စာပီပညာသျှင်ဒေါက်တာရာဟုလာသံကိစ္စည်း၊ ဒေါက်တာ ဗုဒ္ဓရက္ခိတ၊ ဘိက္ခုကဿပ(ယ္ခုနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်၏ဖေါင်ဒါ)၊ ဘိက္ခုအာနန္ဒာကောသလ္လ၊ ဘိက္ခု အဉ္ဇုတာနန္ဒနှင့် ဘိက္ခုပညာဝံသစသော အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ပညာတတ်တပည့် ရဟန်းတော်များ မွီးထုပ်ပီးခပါသည်။
٭ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ပွဲသို့ အိန္ဒိယရဟန်းတော် များ၏ကိုယ်စား ကြွရောက်တော်မူခပြီး၊ ၁၉၅၅-ခုနှစ်တွင် ခတ္တမန္ဒူမြို့၌ နီပေါ ဘုရင်မင်းမြတ် ဦးဆောင် ကျင်းပခသော ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ အစည်းအဝေးသို့လည်းတက်ရောက်တော်မူခသည်။
٭ ၁၉၅၆-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄-ရက်နိ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗဟိုတရား ရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အမ္ဗေဒကာ အပါအ၀င် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၆- သိန်းကျော်ရို့အား အိန္ဒိယနိုင်ငံ နာဂပူမြို့၌ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်သို့ သွင်းပီးတော်မူခရေအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စိတ်ဝင်စားသူ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ၏ အံ့ချီးထောပနာပြုမှုများကို အကြီးအကျယ်ရဟိ တော်မူခသည်။
ဤမျှကြီးကျယ်သော သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်တော်မူခသော ကမ္ဘာ့သာသနာပြုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တစန္ဒြမဏိ မဟာထေရ်မြတ်သည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မေလ (ဂ)ရက်နိ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ယူပီပြည်နယ် ကုသိနာရုံမြန်မာ ကျောင်းတိုက်၌ ဘဝနတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရားပျံလွန်တော် မူခြင်းကြောင့် နိုင်ငံပေါင်း (၃၂) နိုင်ငံမှ ၀မ်းနည်းကြောင်းသ၀ဏ်လွှာများ၊ ကြီးနန်းစာဖြင့် (၅၆၉)စောင်နှင့်၊ လက်ရေးမူဖြင့် (၇၀၉)စောင်ရို့ကို ပို့ပီးခကတ်ပါသည်။
ထို (၁၂၇၈)စောင်သော ၀မ်းနည်းမှုသ၀ဏ်လွှာများရောက်ဟိလာခြင်းက ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ကမ္ဘာက မည်ရွှေ့မည်မျှ လေးစားကြည်ညိုကြသည်၊ မည်ရွှေ့မည်မျှတန်ဖိုးထားကြသည်ကို သက်သီသာဓက မီးမောင်းထိုးပြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
Posted in ဗဟုသုတ	Tagged ဗဟုသုတ	← Older posts
မာတိကာ	ကဗျာ (13)
ကဗျာ စာအုပ် (11)
ရခိုင်သမိုင်း စာအုပ် (46)
ဥပဒေ စာအုပ် (28)
အသုံးဝင်တဲ့ software လေးများ (18)
ngalone for android (5)
နိရဉ္စရာ ရခိုင်သတင်း ဌာန
ဇော်ဂျီဖောင့် ဒေါင်းရန်	ZawGyi Font Download
နောက်ဆုံးတင် ပိုစ့်များ	၀ိညာဉ်လှောင်အိမ် -ဆောင်းလုလင်
ဆူးပန်းခွေ သွယ်ဘယက်နှင့် ပေရွက်လိပ် နားတောင်းဆင်-ခင်ခင်ထူး
ဥပဒေ - အမှုသည်များလက်စွဲ(စာအုပ်)